မြဝတီမြို့တွင် ကျူးကျော်နေအိမ် ၃၈ လုံးအား သက်ဆိုင်ရာမှ စက်အား၊ လူအင်အားဖြင့် ရှင်းလင်း ဖယ်? - Yangon Media Group
မြဝတီမြို့တွင် ကျူးကျော်နေအိမ် ၃၈ လုံးအား သက်ဆိုင်ရာမှ စက်အား၊ လူအင်အားဖြင့် ရှင်းလင်း ဖယ်?
မြဝတီ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၄
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်တွင် ကျူးကျော်နေထိုင်သူများ၏ နေအိမ် ၃၈ လုံးအား ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် နံနက် ၆ နာရီက သက်ဆိုင်ရာမှ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
”ဒီနေရာက ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနအစိုးရပိုင်မြေနေရာဖြစ်ပါတယ်။ အခု ထိုင်း-မြန်မာချစ်ကြည် ရေးအမှတ်(၂)တံတားကြီးပြီးတော့မှာဖြစ်ပြီး တံတားကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ လမ်းမကြီးဖောက်လုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနပိုင်မြေပေါ်မှာ တရားမဝင် ဝင် ရောက်ကျူးကျော်နေထိုင်ကြတဲ့အိမ် ၃၈ လုံးကို ၁၉၅၅ ခုနှစ် အစိုးရအိမ်ဥပစာ(နှင်ထုတ်ခြင်း) အက်ဥပဒေအရ အင်အားသုံးရှင်း လင်းဖယ်ရှားတာပါ။ အခုလိုဖယ် ရှားရှင်းလင်းဖို့ လေးကြိမ်ခေါ်ယူ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ စာပေးခဲ့တယ်။ အဲဒါကိုမဖယ်ကြတဲ့အတွက် အခုလို လူအား၊ စက်အားနဲ့ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းတာပါ”ဟု မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဖြိုးဇော်ကိုကိုက ပြောကြားသည်။
ကျူးကျော်နေထိုင်ကြသည့် နေအိမ် ၃၈ လုံးသည် မြဝတီမြို့ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက် ကုန်သွယ်ရေး ဇုန်ရှိ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ် ရေးဦးစီးဌာနပိုင်ကွင်းအမှတ် (၅၃)ဘီ၊ ယာဉ်စစ်ကွင်းဟောင်း မြေဧရိယာ၊ (၇ ဒသမ ၉၂)ဧက ပေါ်၌ တရားမဝင်ကျူးကျော်နေ ထိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ”ကျွန်တော်တို့က ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှာ အဲဒီအချိန်က မြဝတီခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဒီနေရာကို ကျွန်တော်တို့နေဖို့ပေးခဲ့တယ်။ အဲ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့က အိမ် ရှစ်လုံးဆောက်ပြီးနေထိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်က နှစ်ကွက်အတွက် ကျပ်သိန်း ၁၄ဝ ပေးသွင်းခဲ့ပါတယ်။ အခုဖယ်ရှားခံရတော့ အစားပြန် ပေးတာလည်းမရှိဘူး။ သူတို့က တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုမရှိဘူး။ အခု ကျွန်တော်တို့မှာနေစရာမရှိဘူး။ ဘယ်မှာသွားနေရမှာလဲ၊ ကျွန်တော်တို့မှာအရမ်းနစ်နာပါတယ်”ဟု နေအိမ်ဖယ်ရှားခံခဲ့ရ သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ကျူးကျော်နေအိမ်များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရာတွင် မြဝတီခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထူးလွင်၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဖြိုးဇော်ကိုကို၊ မြဝတီခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုရဲမှူးကြီး အောင်နိုင်ထွန်းနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများ၊ ရပ်ကွက်စုံမှထုတ်နုတ်အင်အား ၁ဝဝ အပါအဝင် စုစုပေါင်းအင်အား ၃ဝဝ ကျော်နှင့် ဖယ်ရှားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။